About Us - Changzhou Zhanhang International Co., Ltd
Zhan Sur, Combo ganacsiga iyo warshadaha ah, waa xirfadle in qalabka CNC mashiinka, aalado warshadaha iyo qalabaynta warshad cilmi qalabka iyo horumarka, wax soo saarka iyo iibinta shirkadaha teknoolojiyad sare.
Our kooxda maamulka farsamo leedahay in ka badan 10 sano oo robot warshadaha iyo waayo-aragnimo wax soo saarka. The alaabta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah: lathes CNC, xarumaha machining, aalado truss, robot gacanta si wadajir ah, nidaamka CNC. Products la xiriira aerospace, metallurgy, warshadaha baabuurta, gaadiidka tareennada, waxbarashada, caafimaadka, mishiinada injineernimada, tamar nadiif ah, qalabka mashiinka, warshadaha difaaca iyo beeraha kale.
Raadinta weeraryahanka mustaqbalka, waxaan isku dayi doonaa si ay u caawiyaan shirkadaha ku wareejin ka "wax soo saarka" in "la abuuro", bixinta sare, wax ku ool ah, xal dhaqaale loogu talagalay macaamiisha si ay u abuuraan ka qiima badan.
Cinwaanka: 1022, Dhisidda 1, xarrago Commercial Plaza, Degmada Xinbei, Changzhou City, Jiangsu Gobolka Shiinaha